Sababtii Ronaldo uu u diiday inuu funaanada ka badasho laacib ka tirsan Girona oo daaha laga rogay – Gool FM
Sababtii Ronaldo uu u diiday inuu funaanada ka badasho laacib ka tirsan Girona oo daaha laga rogay
Liibaan Fantastic November 1, 2017
(Girona) 01 Nof 2017 Alex Granell oo ah kabtanka kooxda Girona ayaa sharaxaad ka bixiyay sababtii Ronaldo uu ugu diiday inuu funaanada u badalo.
Cristiano Ronaldo ayaa la arkayay isaga oo diidaya in funaanada uu ka badasho Alex Granell dhamaadkii ciyaarta.
29 jirka reer Spain ayaa sheegay in Ronaldo uu ku eedeeyay Girona inaysan ciyaarin ciyaar wanaag sidaas darteedna uusan diyaar u ahayn inay is dhaafsadaan funaanadaha.
“Waxaan ka codsaday Ronaldo inaan funaanadaha is dhaafsano, laakiin waa uu diiday, wuxuu igu yiri Girona ma ciyaarin kubadd nadiif ah waayo waqtiga ayaan luminaynay daqiiqadihii ugu danbeeyay ee ciyaarta” ayuu yiri Alex Granell.
“Wuxuu igu yiri waxaad u egtahay laacib fiican, laakiin funaanad kaama badalanayo, waxaan u sheegay in guushii aan gaarnay aysan ahayn mucjiso balse aan helnay kadib dadaal badan oo aan samaynay”.
“Ronaldo wuxuu nagu eedeeyay in aanaan ciyaarin kubadd qurxoon oo aan waqti lumis uun u joognay garoonka, haddii aan ciyaari lahayn kubadda uu ka hadlayo Ronaldo uma soo dalacneen horyaalka heerka koowaad”.
“Waan fahmi karaa sirta ka danbaysa caradiisa, dabcan ma uusan doonayn in Real ay guul daraysato oo ay ka fogaato hogaanka horyaalka”.
Liverpool oo indhaha ku haysa goolhaye Keylor Navas
Wenger oo jawaab ka bixiyay in kooxdiisu ay u dhaqaaqayso saxiixa Lemar bisha janaayo